Hard Disk နဲ့ SSD တွေမှာ ဘာဖြစ်လို့ Storage အပြည့်မပါရတာလဲ?
16 Nov 2018 . 1:08 PM
Hard Disk ဝယ်ရင် အမေးများဆုံးက Storage Capacity ဘာလို့ အပြည့်မပါတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆို ကွန်ပျူတာ Storage မှာ 1GB ကို 1,000 MB လို့ မသတ်မှတ်သလို 1TB ဟာလည်း 1,000 GB ပါဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုရင် Operating System က2Bytes,4Bytes စသဖြင့် သတ်မှတ်တဲ့အတွက် မြောက်ဖော်ကိန်းက 10, 100, 1,000 မဟုတ်လို့ပါ။ ဆက်သွယ်ချက်ကို ထပ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် 1 Kilobyte (KB) မှာ 1,024 Bytes ၊ 1Megabyte (MB) မှာ 1,024 KB ၊ 1 Gigabyte (GB) မှာ 1,024 (MB) နဲ့သွားတာမလို့ 1TB ဆိုတိုင်း 1,000 GB ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့မပါသလဲဆိုတာ ထပ်ပြီး အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြရဦးမယ်ဆိုရင် 1MB မှာ 1,048,576 Bytes ၊ 1GB မှာ 1,073,741,824 Bytes ၊ 1Terabyte (TB) မှာ 1,099,511,627,776 Bytes အသီးသီးရှိမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ထုတ်လုပ်သူတွေက 1TB ကို 1,000 GB လို့ တွက်ပေးတယ် ဥပမာ 1GB = 1,000 MB Reference ယူတယ်ပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ် သူတို့ ကြေညာတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင် 1TB မှာ 1,000 GB အပြည့်ပါရမယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့်လို့ OS ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ 1TB ဆိုတာကြီးက အပြည့်ပါမလာတော့ပါဘူး၊ ဒါကို ဆက်သွယ်ချက်အတိုင်းတွက်ပြရမယ်ဆိုရင် Windows အရ 1TB မှာ 1,099,511,627,776 Bytes ရှိပါတယ်၊ Manufacturer အရဆိုရင်တော့ 1,000,000,000 Bytes အတိပေါ့။ ဒီတော့ GB ဘယ်လောက်ပါသလဲသိချင်ရင် Windows ဆက်သွယ်ချက်အတိုင်း 1,000,000,000 ကို 1,073,741,824 နဲ့ စားချလိုက်ပါ။ 0.931 GB ဆိုတဲ့ အဖြေကြောင့် 1,000 နဲ့ ထပ်မြောက်လိုက်ရင် 931GB ပဲရှိမှာပါ။ ဒီနည်းအတိုင်း 4TB ကို တွက်မယ်ဆိုရင် 3.72 TB (3,725 GB) အဖြေပဲထွက်လာမှာမလို့ Manufacturer တွေ ညာရောင်းတယ်မဆိုရဘဲ Windows က သတ်မှတ်တဲ့ Data သိမ်းဆည်းစနစ်ကြောင့်သာ အပြည့်မရှိတော့တာလို့ လက်ခံရမှာပါ။
Hard Disk နဲ့ SSD တှမှော ဘာဖွဈလို့ Storage အပွညျ့မပါရတာလဲ?
Hard Disk ဝယျရငျ အမေးမြားဆုံးက Storage Capacity ဘာလို့ အပွညျ့မပါတာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆို ကှနျပြူတာ Storage မှာ 1GB ကို 1,000 MB လို့ မသတျမှတျသလို 1TB ဟာလညျး 1,000 GB ပါဝငျတာမဟုတျပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ Operating System က2Bytes,4Bytes စသဖွငျ့ သတျမှတျတဲ့အတှကျ မွောကျဖျောကိနျးက 10, 100, 1,000 မဟုတျလို့ပါ။ ဆကျသှယျခကျြကို ထပျဖျောပွရမယျဆိုရငျ 1 Kilobyte (KB) မှာ 1,024 Bytes ၊ 1Megabyte (MB) မှာ 1,024 KB ၊ 1 Gigabyte (GB) မှာ 1,024 (MB) နဲ့သှားတာမလို့ 1TB ဆိုတိုငျး 1,000 GB ရှိမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဘာလို့မပါသလဲဆိုတာ ထပျပွီး အကယျြတဝငျ့ဖျောပွရဦးမယျဆိုရငျ 1MB မှာ 1,048,576 Bytes ၊ 1GB မှာ 1,073,741,824 Bytes ၊ 1Terabyte (TB) မှာ 1,099,511,627,776 Bytes အသီးသီးရှိမှာပါ။ ဒီနရောမှာ ထုတျလုပျသူတှကေ 1TB ကို 1,000 GB လို့ တှကျပေးတယျ ဥပမာ 1GB = 1,000 MB Reference ယူတယျပေါ့။ ဟုတျပါတယျ သူတို့ ကွညောတဲ့အတိုငျးသာဆိုရငျ 1TB မှာ 1,000 GB အပွညျ့ပါရမယျပေါ့။
ဒါပမေယျ့လို့ OS ထဲရောကျသှားတဲ့အခါ 1TB ဆိုတာကွီးက အပွညျ့ပါမလာတော့ပါဘူး၊ ဒါကို ဆကျသှယျခကျြအတိုငျးတှကျပွရမယျဆိုရငျ Windows အရ 1TB မှာ 1,099,511,627,776 Bytes ရှိပါတယျ၊ Manufacturer အရဆိုရငျတော့ 1,000,000,000 Bytes အတိပေါ့။ ဒီတော့ GB ဘယျလောကျပါသလဲသိခငျြရငျ Windows ဆကျသှယျခကျြအတိုငျး 1,000,000,000 ကို 1,073,741,824 နဲ့ စားခလြိုကျပါ။ 0.931 GB ဆိုတဲ့ အဖွကွေောငျ့ 1,000 နဲ့ ထပျမွောကျလိုကျရငျ 931GB ပဲရှိမှာပါ။ ဒီနညျးအတိုငျး 4TB ကို တှကျမယျဆိုရငျ 3.72 TB (3,725 GB) အဖွပေဲထှကျလာမှာမလို့ Manufacturer တှေ ညာရောငျးတယျမဆိုရဘဲ Windows က သတျမှတျတဲ့ Data သိမျးဆညျးစနဈကွောငျ့သာ အပွညျ့မရှိတော့တာလို့ လကျခံရမှာပါ။